ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူ (၈) ဦးကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူ (၈) ဦးကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကနေ ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းပြီး တရားမဝင် ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၈ ဦးကို မနေ့ မနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်း စစ်တပ် အာဏာပိုင်တွေက ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့ကမနက် (၁၀) နာရီလောက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၈) ဦးဟာ စက်လှေတစ်စီးနဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်သန်း ဝင်ရောက် လာကြတာ ဖြစ်ပြီး ပေါက်တောမြို့နယ်၊ စစ်ကဲပြင် ကျေးရွာဘက်မှာ တပ်ချထားတဲ့ ခမရ (၃၇၁) က မသင်္ကာတဲ့အတွက် အဲဒီစက်လှေကို ရပ်တန့်ဖို့ ပြောကြားခဲ့ရာမှာ စက်လှေက မရပ်တန့်ဘဲ ဆံတော်ရှင် ကမ်းဘက်ကို ဆက်လက်ဦးတည် ခုတ်မောင်း နေတဲ့အတွက် စစ်တပ်က ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံသား တစ်ဦးမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး မနေ့က ညနေ(၄)နာရီခန့်မှာ စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို တင်ထားရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ကျန် (၇) ဦးကိုတော့ မနေ့က စစ်တွေ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။
မနေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံသား(၈)ဦးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဘဇားခရိုင်၊ တက္ကနက်မြို့နယ်၊ မူနာဒီကျေးရွာက ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
saw mya khaing
all of them are buddist and the went myanmar for business purpose. Jul 17, 2012 06:05 PM
Dear Little Sai,
( I do not know there are Sai in Arakan or not). By the way please study first about the Arakanese history before you swear without reason . I hope you should civilize now because you live in not your birth country and you are immigrant to Australia and if any English man stand infront of your door and swear that GO BACK HOME LITTLE BURMESE. How will you feel. NOOOO HUMANNNNNNNNN RIGHTTTTT !!
Jul 17, 2012 05:57 AM
Please clarify the people on boat are Bengalis Buddhist or Bengalis Muslim( socalled Rohingya?) by name will be helpful . Because nowaday most of the people understood that immigrant are all Bengalis Muslim( That is actually totally against of the reality that most of the illegal immigrant are Bengalis Buddhists and they are very similar face, color of skin and their entire ancestors are Bengalis from Awar Jun( Shin Maphu Islanders).
Jul 17, 2012 05:53 AM
There are not only muslim ( socalled rohingya) are migrating to Burma. Most of them are Buddhit Bengalis are migrated from Bangaldesh to Burma ( Do U know about this matter?) In figure those Buddhist Bengalis are more than Muslim ( socalled Rohingyas - Please study little brain people)
In the image everybody think Muslim dominate country like Bangladesh have only Muslim, actually NOOOOOOOOOOO. Those who are messing the problem are Buddhist Bengalis ( original from AWA JUN/ Shin Ma Phyu Islanders - so please study before scream unknowingly) I think just study with original Yakhine Buddist who will tell you the true story what I said above.
Jul 17, 2012 05:15 AM